कस्तो समस्या हुने मानिसले कोरोनाको खोप लगाउन मिल्दैन ? - TokhaLive
१० माघ २०७७, शनिबार १४:५२
कस्तो समस्या हुने मानिसले कोरोनाको खोप लगाउन मिल्दैन ?
काठमाडौं । भारतले नेपालका लागि १० लाख डोज कोरोना भाइरसको खोप हस्तान्तरण गरेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाललाई बिहीबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त खोप जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई लगाइने बताएको छ । मन्त्रालयले जोखिम क्षेत्रमा खटिने चिकित्सक, सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई उक्त खोप लगाउने बताएको छ ।
भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले ज्वरो आएका, रक्तस्राव गडबडी, एलर्जी भएका, गर्भवती महिला, रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेका मानिसहरुले खोप लगाउन नहुने बताएको छ ।
यस्ता समस्या भएका मानिसहरुमा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने सेरमले बताएको छ । त्यस्तै पहिलो चरणको खोप लगाउँदै एलर्जी भएमा दोस्रो चरणको खोप नलगाउन पनि सेरमले आग्रह गरेको छ ।
हालसम्म कोरोनाका खोपले मानिसहरुलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित राख्ने वा नराख्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन् । किनकी खोप निर्माता कम्पनीहरु हालसम्म पनि क्लिनिकल परीक्षणमा रहेकाले खोप लगाउने मानिसले ‘आफू कुन प्रकृतिको रोगसँग लडिरहेको छु’ त्यो एकिन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् ।
आजदेखि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान:-
१४ माघ २०७७, बुधबार ०८:४८
डडेलधुरा ब्लड बैंकलाई जापानको ६५ लाख सहयोग
२२ पुष २०७७, बुधबार १६:३२
चिसो बढेसँगै कान्तिमा उपचारका लागि आउने बालबालिकाको संख्या बढ्यो
६ पुष २०७७, सोमबार ०९:५८
विश्वका १०० प्रभावशाली नर्स तथा मिडवाइफको सूचीमा नेपालका ४ जना
३ पुष २०७७, शुक्रबार २०:११
२८ मंसिर २०७७, आईतवार ०७:०६
कफी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदा कि बेफाइदा ?